Apple Music waxay diyaarineysaa ku dhawaaqida toddobaadkan: HiFi iyo maqalka goobta | Wararka IPhone
Luis Padilla | 17/05/2021 10:38 | Apple Music, Noticias
Apple waxay leedahay adeeg cusub oo HiFi ah oo loogu talagalay Apple Music, iyo wararka xanta ah ee ku saabsan ogeysiiskan cusub hadda waa inaan ku darno hormar ay shirkaddu lafteedu na siiso barnaamijka Apple Music: "Muusiggu wuxuu isu beddelayaa weligiis."
Apple Music HiFi ayaa imaan kara berri, 18-ka Maajo. Tan waxaa lagu xaqiijiyey wararkii ugu dambeeyay, ee si isdaba-joog ah u faahfaahsan toddobaadyadii la soo dhaafay oo ku saabsan astaamaha adeeggan muusikada cusub "iyada oo aan lumin tayada." Apple waxay ku biiri doontaa adeegyo kale oo horey u bixiya muusikada HiFi streaming, sida Tidal, Deezer ama Amazon Music. Tartanka weyn ee Apple Music ahna hogaamiyaha suuqa, Spotify, ayaa ku dhawaaqay barnaamijkiisa HiFi ee sanadkan 2021, isaga oo aan cayimin taariikhda la bilaabayo. adeegyadan. HiFi waxay siisaa muusig bilaa tayo la'aan, wax dhaca marka muusigga la tuujiyo si ay u qaadato boos yar oo soo degsigeeduna uusan u cunin taraafikada xogta badan.
Nidaamkan aan khasaarooyinka lahayn wuxuu u baahan yahay xiriir internet leh oo leh marin ballaadhan oo ballaadhan, sidoo kale wuxuu qaadanayaa in badan oo ka mid ah aaladdayada, laba dhinac oo muhiim ah oo ay tahay in dadka isticmaala ay tixgeliyaan. Tusaale ahaan, hees 3 daqiiqo ah ayaa cuni karta ilaa 145MB oo leh 24-bit / 192kHz HiFi tayo leh, iyadoo nidaamka cadaadiska caadiga ah ay noqon karto 1.5MB ama 6MB haddii aan doorano tayo sare. Sidan oo kale, Apple waxay diyaarisay nidaam la-qabsi ah oo adeegsaduhu ku dooran karo tayada uu rabo, laakiin sidoo kale wax laga beddelo iyadoo kuxiran xaaladaha xiriirka internetka ee la heli karo mar walba.
Muusigani 'HiFi' waa la ogaan doonaa markaan ku isticmaalno HomePod-yadayada guriga, ama aan ku dhagaysanno dhagaha dhagaha leh ee sare. Laakiin ka warran headphones-keena Bluetooth? Muhiim ma aha in laga doodo wax badan oo ku saabsan sida yare e muusikada HiFi wax u tarayo marka aan isticmaalno dhagaha dhagaha ee Bluetooth si aan u dhageysano Xitaa dhagaha aqoonta leh waxay qirayaan in kala duwanaanshuhu yahay mid aan la iska indhatiri karin maxaa yeelay isku xirnaanta Bluetooth-ka ayaa ah culeys meesha ka jira oo ay adag tahay in wax isbadal ah uu ka dhexeeyo koodh tayo sare leh oo wanaagsan iyo adeegga HiFi. Laakiin Apple waxay lahaan kartaa wax kale oo diyaarsan oo aan horey ugu tijaabin karno filimada: maqalka goobta. Wax aad u la mid ah ayaa u imaan kara Apple Music, iyada oo lagu gaarayo cod dheeri ah, saddex-cabbir ama wax kasta oo aad rabto inaad u wacdo, taasina waxay beddeli doontaa waayo-aragnimada isticmaaleyaasha leh sameecadaha dhegaha ee Bluetooth, inkasta oo dhammaan noocyadu aysan is-waafajin doonin.
Oo ka waran qiimaha? Sida laga soo xigtay xanta Apple ma kala duwanaan doonto qiimaha adeeggooda HiFi, oo ah barxaddii ugu horreysay ee dooran lahayd inay u soo bandhigto adeegsadayaasheeda tayada muusigga oo aan kharash dheeraad ah ku bixin. Tidal waxaa lagu qiimeeyaa .19,99 29,99 koontooyinka shaqsiyadeed iyo .14,99 9,99 accounts koontooyinka qoyska. Deezer waxay ku siisaa adeeggeeda HiFi € 14,99 bishiiba koontooyinka shaqsiyadeed. Ma garanayno qiimaha Spotify HiFi oo aan wali la helin. Apple Music waxaa lagu qiimeeyaa $ XNUMX xisaabaadka shaqsiga iyo $ XNUMX xisaabaadka qoyska. Haddii kororka aan qiimaha aheyn la xaqiijiyo, Apple Music wax badan ayeey ku adkeyn laheyd tartamayaasheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Music waxay diyaarinaysaa ku dhawaaqida toddobaadkan: HiFi iyo maqalka goobta
Kani wuxuu noqon lahaa astaanta Apple Music Hi-Fi "Lossless"
'Dukumiintiyada ICloud iyo Macluumaadka' si loogu milicsado iCloud Drive bishii Maajo 2022